Myanmar Astro Research Breau
ဇွန်လ ၁၅ရက်မှ ဇူလိုင်လ၁၆ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူများအတွက်
အရာရာတိုင်းမှာ ပညာညဏ်အတွေးအခေါ်ရှိရှိဖြင့်သာ ပြောဆိုတတ်သည်။ စကားအပြောအဆိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မည်။ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် လောကကို ကောင်း စေသော ဆန္ဒရှိနေတတ်သည်။ ဣနြေ္ဒသိက္ခာရှိရှိနေလိုတတ်သည်။လောကီကိစ္စများဆောင် ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတတ်သည်။ စိတ်နှစ်မျိုးနှစ်ခွရောထွေး ခြင်းများရှိသည်။
ကျန်း​မာ​ရေး၊ ပ​ညာ​ရေး၊ စီးပွားရေး
ကျန်းမာရေး။	။ခန္ဓာကိုယ်နွမ်းနယ်မှုရှိတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်မေ့လျော့ နေတတ်သည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတတ်သောရောဂါဝေဒနာမရှိတတ်သော်လည်း လေထိုးလေအောင့်အစာအိမ်ရောဂါတို့နှင့်လေကြောင့်ဖြစ်သောလေဖြန်းခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း တို့ကို သတိ ထားသင့်ပါသည်။
ပညာရေး။	။ပညာရေးညဏ်အားကောင်းမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ၊ အရှေ့တိုင်းဘာသာ ပညာစသည်တို့နှင့် အကျိုးပေးပါသည်။
စီးပွားရေး၊အလုပ်အကိုင်။	။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူများ အတွက်ကံကောင်းမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသော ငွေကြေးကိုကြည့်၍ သင့်တော် မည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရတတ်သည်။
အ​ချစ်​ရေး၊ အိမ်​ထောင်​ရေး၊ စီးပွားရေး
အချစ်ရေး။	။မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းဖြစ်သောကြောင့်ကူညီမှု စောင့် ရှောက်မှုပေးရင်းအနေနီးလာပြီး သနားကြင်နာမှုများနှင့်အတူ ချစ်သူများဖြစ်လာတတ်ပါ သည်။ အချစ်ရေးကောင်းပါသည်။
အိမ်ထောင်ရေး။	။အိမ်ထောင်ရေးကံလည်းသင့်တင့်နေတတ်ပါသည်။ ​
၀တ်ဆင်သုံးစွဲရန်အရောင်။	။အစိမ်းရောင် အေးမြသောအရောင်
​	၀တ်ဆင်ရန်ရတနာ။	။ကျောက်စိမ်း၊ မြ
အကျိုးပေးသောနေ့ဂဏန်း။	။ဗုဒ္ဓဟူး ၄၊ ၇
Copyright @ 2014. Allright Reserved by Myanmar Astro. Prepared by DPS. Designed by MPPL.